Wararka - Qeexitaanka suuxdinta
Qeexida mashiinka suuxinta ayaa ah in bukaanka jirkiisa ama qeyb ka mid ah si ku meel gaar ah u lumiyo dareenka xanuunka. Qeexitaanka oo dhameystiran ayaa ah in bukaanka jirkiisa ama qeyb ahaan si ku meelgaar ah u miyir doorsoomo iyo falcelin si kasta ha noqotee, inuu u aqbalo daaweynta qalliinka si habsami leh, iyo inuu si dhaqso leh oo gebi ahaanba u soo celiyo dareenkii asalka ahaa iyo falcelinta qalliinka kadib.
Suuxdinta waxaa loo qaybiyaa suuxdinta guud iyo suuxdinta guud (suuxdinta maxalliga ah).
Suuxdinta guud waa astaamaha ka hortagga maskaxda, miyirka oo gebi ahaanba lumay, bukaanku ma aha oo kaliya dareemida xanuun la'aan, xitaa cabsi, daal iyo raaxo la'aan ayaa lumaya, bukaankuna ma lahan wax ikhtiyaar ikhtiyaari ah ama qasab ah, taas oo ah in la yiraahdo, bukaanka ku jira hawsha qalliinka, qalliin ma lahan wax falcelin ama saameyn ah. Sababtoo ah bukaanku ma lahan aragti iyo falcelin u dhiganta qalliinka, mararka qaarkood taas awgeed, dhakhaatiirtu lama xiriiri karaan bukaanka, bukaanku si dhib leh uma ilaalin karaan shaqadooda jir ahaaneed, taas oo sidoo kale u horseedi doonta heer khatar ah bukaannada.
Qaabka suuxinta guud wuxuu leeyahay sharciga suuxinta neefsashada iyo sharciga suuxdinta guud ahaan laba nooc.
Suuxdinta la neefsaday waxay ku lug leedahay neefsashada isku darka gaasaska (si loo hubiyo isku-uruurinta qaar oksijiin ah) si bukaanka loo siiyo suuxdinta guud.
Suuxdinta la isku duro waa cirbadeynta suuxdiyaha dareeraha ah ee jirka si loo siiyo suuxin guud.
Suuxdinta neefta iyo suuxdinta irbadda, suuxdinta neefsashada ayaa ka sarreeya qaar, maxaa yeelay inta lagu jiro suuxdinta neefsashada, neefsashada isku darka suuxdinta gaasku sidoo kale waxay leedahay neefsasho, takhtarka suuxinta ayaa hagaajin kara isku-darka gaaska isku-darka suuxdinta waqti kasta, si loo beddelo qoto dheer ee suuxdinta. Marka la isku durayo suuxdinta, ma sahlana in la beddelo qoto dheer ee suuxdinta. Haddii suuxdintu ay aad u qoto dheer tahay ama aad u hooseyso, mararka qaarkood ilaa xad, ma saameyn doonto oo keliya qalliinka, laakiin sidoo kale waxay u nugul tahay khatarta nolosha. Markaa waqtigan xaadirka ah, suuxdinta guud ee loo isticmaalo isbitaalada waa suuxdinta inta badan.